Fikasana haka an-keriny manampahefana Telo lahy niakatra fampanoavana
Niakatra fampanoavana omalyalarobia 7 aogositra ireo voasaringotra ho mpaka an-keriny manampahefana any Betroka raha ny tafa manokana nifanaovana tamin’ny kaompanian’ny zandariamariam-pirenena any an-toerana.
Raha tsiahivina, ny 2 aogositra teo no tratran’ny fokonolona tao Marozaza, kaominina Tsaraitso ny dahalo telo lahy mpangalatra olona. Teo am-panatonana ny toerana nisy ny sefo fokontanin’i Marozaza ireo jiolahy telo lahy erotrerony no tsikaritry ny fokonolona. Nisoro tamin’ny fisamborana avy hatrany ny mponina sy ny mpiray dinan’i Mangoky ary ny zandary any an-toerana. Nandritra ny famotoran’ny zandary no nahalalana fa efa jiolahy karohina izy ireto ary efa ikoizana amin’ny halatra olona, indrindra ny omby amin’iny faritra Betroka iny.
Manahy ireo mponina amin’ny valifatin’ireto jiolahy ireto, indrindra amin’ny kakay amin’ny lehiben’ny fokontany izay efa nokasainy halaina an-keriny nefa tsy tanteraka. Matetika mantsy raha ny fampitam-baovao avy an-toerana, maro izy ireo no ao anatin’ny tambajotran’olon-dratsy. Tsy sahy mitory ihany koa ny ankamaroan’ny tantsaha noho ny tahotra valifaty sy ny fivezivezena fiakarana sy fidinana fitsarana. Rehefa tsy misy mpitory anefa, araka ny lalàna velona eto amin’ny tany sy ny firenena dia afaka maina ireo voapanga na mampidi-doza aza. Mila jerena akaiky ny lalàna sy ny fiarovana ireo mpitory, indrindra ny fizotran’ny fitsarana izay mampikolay ny maro.